diyeeshe – Puntland Voice
Madaxwaynaha Dowladda Puntland Dr.Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo 9-8-2014-kii ka ambabaxay Magaalada Garoowe ee Caasimadda Dowladda Puntland oo maalimihii lasoo dhaafay hawlo shaqo ku joogey magaalada Boosaaso ee xarunta goolka Barri ayaa Maanta Dib ugu soo laabtay Magaalada Garoowe. Soo […]
Dhalinaro Soomaali ah oo la sheegay inay ku biireen Alqaacidada Maqrib.
Taliska Hawlgalka QM ee dalka Mali (MINUSMA) ayaa xaqiijiyey inay Dagaalyahanno ka kala yimid dalalka Somalia, Chad iyo Tunisia iyo kuwa haysta dhalashadda dalalka Spain iyo Morocco ka dagaalamayaan Galbeedka magaalladda Timbuktu ee dalka Mali. Dagaalyahanadaasi ayaa xubno ka ah […]
Guddoomiyaha Hay’adda Qaxootiga Qaranka ee dalka Yemen, Amiir Caydaruus ayaa kulan la qaatay Yasuko Shimizu oo ah Sarkaalka Hawlgalladda ee Xafiiska Hay’adda QM ugu qaabilsan Arrimaha Qaxootiga (UNHCR) ku leeyihiin dalka Yemen. Labada Mas’uul ayaa waxay Kulankooda ku lafa-gureen xaalladda […]
Mid ka mid ah Ururada Warbaahineed ee dalka oo ka digay caburinta saxaafada xorta ah
G/xigeenka Dalladda Warbaahinta Madaxa Bannaan ee SIMHA, Ismaaciil Sheekh Khaliif ayaa sheegay inay tahay arrin laga xumaado hadalkii uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku sheegay inay 90% Warbaahinta Madaxa Bannaan jaal la yihiin Alshabaab. Ismaaciil Sheekh Mukhtaar oo caawa Wareysi […]
Muqdisho, 13 Agosto 2014 – Xubnaha Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho maanta aroortii, iyagoo booqasho taariikhi ah ku yimid Soomaaliya si ay u eegaan horumarka ay gaartay Dowladda Federaalka oo kaalmo ka helaysa beesha caalamka […]
Biyo La’aan Baahsan oo ka taagan degmada Baargaal
Baargaal(PV):-Wararka ka imaanaya Degmada Baargaal ee Gobolka Gardafuu ayaa sheegaya in deegaano hoos yimaada degmadaasi ay ka taagan tahay biyo la’aan baahsan taasoo qarka u saaran in looga barakaco. Wararka ugu danbeeya ee aan heleyno ayaa sheegaya in fuustada biyaha […]
Wafdi Qaramada Midoobe ka socda oo soo gaaray Muqdisho iyagoo xalane xiligaan kula shirsan Madaxda dowlada Dowlda FD
Muqdisho(PV):-Xaruntac ciidamada AMISON ee Xalane Magaalada Muqdisho waxaa ka socda kulan ay leeyihiin wafdi ka socda Qaramada Midoobe iyo Madaxda sar sare ee dalka. Wafdiga qaramada Midoobe ka socda waxaa la sheegay inay yihiin Kooxda Dabagalka Cunaqabateynta Hubka Ee Somalia,waxaana […]
AMISOM ” waxba kama jiraan inaan madaafiic ku duqeynay shacabka Magaalada Marka
Taliska Amisom ayaa ka hadlay dhibaato ciidamadoodu ka wadeen maalmihii ugu danbeeyay magaalada Marka ee xarunta Gobolka shabeelaha hoose halkaasoo ay guryo shacab degan yihiin ku duqeeyeen. Sarkaal u hadlay ciidamada Midowga Afrika ee magaca amisom ku jooga Magaalada Muqdisho […]
Muqdisho:Mid ka mid ah baalayaasha Nalalka qoraxda ku shaqeeya oo saaka qarax miino lagu burburshay
Waxaa Saaaka qarax aad u xoogan laga maqlay nawaaxiga isbitaalka Xoogga degmada Hoddan ee Magaalada Muqdisho. Qaraxa oo dhacay saaka aroortii hore waxaa lala eegtay mid ka mid ah baalayaasha nalalka ee ku shaqeeya qoraxda kaaso dhulka ku soo dhacay. […]
Hadal ka soo baxay Boliska Kenya ayaa waxay sheegeen inay qabteen 16 qof oo lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen Dagaalyahannaddii weeraradda ka geystay Gobalka Laamu ee dalka Kenya bishii June ee la so odhaafay. Wargeyska The Daily Nation […]